Category Nicky Paing – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Root Call Blocker Pro v1.8.3.30 (2.66MB) Beat the Boss2(17 ) v1.6 Apk Game (42.28 Mb) The Pirate Bay Browser Premium v5.4.3 Apk (2.52 Mb) iExplorer 3.2.1.4 For Mac Os X 16.5 MB Tower Defense 1.3.5 Game For Mac Os X 30MB Home
By Nicky Paing On Saturday, May 11th, 20132Comments iMusic – (iPhone5Style) for Android Devices.., ShareiOS6မှာပါဝင်လာတဲ့ music app ရဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ Android music player လေးပါ။
သုံးကြည့်ရသလောက်တော့အသံအရည်အသွေးကသာမန်အဆင့်လောက်ပါပဲ…ထူးခြားတာဆိုလို့ More... By Nicky Paing On Saturday, May 4th, 20132Comments Dubstep Ringtones For MMAS Lovers.., ShareMMAS ကိုအားပေးကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ Dubstep Music ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေပါမလားခင်ဗျ…
ခုနောက်ပိုင်း More... By Nicky Paing On Saturday, March 30th, 20132Comments Android Device များအတွက်အလန်းစား Tattoo Camera App သုံးခု… Shareမနေ့က iOS အတွက် တက်တူးကင်မရာလေးတွေတင်ပေးတော့ Android အတွက်ရောမရှိဘူးလားလို့မေးမေးနေကြတဲ့ဘော်ဒါတို့အတွက် More... By Nicky Paing On Friday, March 29th, 20132Comments iDevice သုံးတဲ့သူတွေ Tattoo Camera App တွေနဲ့လန်းကြမယ်… Shareတက်တူးယဉ်ကျေးမှုဆိုတာရှေးခေတ်အဆက်ဆက်ကတည်းကရှိလာခဲ့တာပါ။အခုခေတ်လူငယ်တွေလဲ More... By Nicky Paing On Monday, March 25th, 2013 1 Comment Speed Parking 3D For Android. Shareကားပါကင်ထိုးပေးရမယ့်ဂိမ်းလေးပါ။
အရှေ့ဂီယာ၊အနောက်ဂီယာချိန်းနိုင်သလို More... By Nicky Paing On Thursday, February 28th, 2013 1 Comment FB Jumper ကိုသုံးပြီး Facebook မှာခရီးထွက်ကြမယ် (For Root Users) :D … Shareကျွန်တော်တို့တွေ Facebook မှာ Status တွေ ၊ ဓာတ်ပုံတွေတင်လို့ ကိုယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေတင်တဲ့အခါ More... By Nicky Paing On Friday, February 22nd, 20132Comments How to Jailbreak and Activate Without Sim Card in iOS 6.1.2 (using Sn0wbreeze) Share
ကဲ..အခုပြောမယ့်နည်းလေးက iPhone တွေအကုန်လုံးကို Support လုပ်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော့်iPhone4 More... By Nicky Paing On Thursday, January 31st, 20130Comments 128 GB ရှိသော iPad4ကို ဖေဖေါ်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့တွင် Apple ဖြန့်ချီမည်။ Share
ရက်ပေါင်းများစွာအင်တာနက်ပေါ်မှာ ကောလဟာလပျံနှံ့နေတဲ့ 128GB iPad ကို Apple မှအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
New More... By Nicky Paing On Tuesday, January 22nd, 20132Comments BlackBerry Z10 Preview… Share Ref : gsmarena.com
Rumored. Exp. More... By Nicky Paing On Monday, January 21st, 20132Comments CityMaps2Go(v4.3.2) for iPhone/iPad/iPod Touch… Share
GPS Application တွေအများကြီးထဲကမှ Offline သုံးရတာအဆင်ပြေမယ့် Application လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဗျာ…
CityMaps2Go More... Next Page »
အမျိူးကောင်းသား on Folder Protect 1.9.5 For Pc 3MbHein Htet on ဖုန်းဈေးနှုန်းများ ( Mobile Price)မိုးညိုသား on Android Multipurpose Toolkit version 1.0Zom Seng Khae on SRS Root -One Click Root tool (Support Android version 1.5 to 4.2)Zom Seng Khae on SRS Root -One Click Root tool (Support Android version 1.5 to 4.2) Android Development